लोक सेवामा पदाधिकारी नियुक्तीसँगै बढुवा प्रक्रिया शुरु
निशान न्युज असार १४, 2078
काठमाडौं । विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र प्रदेशहरूमा लामो समयदेखि विभिन्न सेवा समूहका गरी आठ सचिव पद रिक्त रहँदै आएको छ । प्रशासन सेवाका पाँच, इन्जियरिङ सेवाका दुई र वन तथा कृषि सेवाका १ गरी ८ सचिव पद रिक्त रहे पनि समयमा नै पदपूर्ति हुन नसक्दा ती निकायका महत्वपूर्ण काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।
लोकसेवा आयोगमा तीन महिनादेखि पदाधिकारी नहुँदा सचिव बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध रहँदै आएको थियो । लोकसेवामा पदाधिकारी आएसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको हो । समयमा नै पदपूर्ति नहुँदा सचिव बढुवाको मुखमै रहेका वरिष्ठ सहसचिव मर्कामा पर्दै आएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भने आइतबारदेखि सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ । ‘लोकसेवाका पदाधिकारी आएसँगै सचिव बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको छ, अब छिट्टै योग्यताक्रममा रहेका सहसचिवहरू सचिवमा बढुवा हुनेछन् ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । सचिव बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्ष लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष रहेन कानुनी प्रावधान छ ।
यसरी सचिव बढुवा हुनेमा सहसचिव दामोदर रेग्मी, गणेश पाण्डे, मधुसूदन बुर्लाकोटी, खगेन्द्र नेपाल, किरणराज शर्मा, रामप्रसाद घिमिरेलगायत छन् । उनीहरू सबै जना आगामी दुई साताभित्रै सचिवमा बढुवा हुनेगरी बढुवा समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको बढुवा समितिको सचिवालयको रूपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह (एमबीबीएस)मा प्राथमिकताका आधारमा छात्रवृत्ति र विदेशी...
नयाँ शाखा अधिकृतलाई सर्वाेच्चको अंकुस : नतिजा स्थगित, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लोकसेवा आयोगले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) तर्फको...
निस्कियो विद्युत प्राधिकरणको पछिल्लो नजिता, को उत्तिर्ण भयो ? को भएन ? नामावलीसहित
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असार १३ गते प्रकाशित गरेका विभिन्न पदका लागि लोकसेवा आयोगबाट...
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले प्राविधिक समूह अन्तर्गत विभिन्न उपसमूहमा नयाँ विज्ञापन खोलेको छ । प्रह...
नेपाली सेनामा खुल्यो नयाँ जागिर, ४ हजारले रोजगारी पाउँदै
काठमाडौं । लामो समयपछि नेपाली सेनाले विभिन्न स्थानमा ४ हजारको सङ्ख्यामा सैन्य भर्नाको आवेदन खुल्ल...
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न सूचना प्रकाशित गरेको छ । आयोगले विभिन्न विज्...